Jonga uSheen-uMvelisi oyiNgcali yeKhamera yeBhloko yokuSondeza-Hangzhou Viewsheen Technology Co., Ltd.
Ukwenziwa kweModyuli yoLunge olude lokuSondeza iKhamera
Sineminyaka engaphezu kwe-10+ yokuSondeza iKhamera yokuSondeza
IHangzhou View Sheen Technology Co., Ltd. lishishini elikhokelayoikhamera yebhlokhi yokusondezaumboneleli.Injongo yethu kukuba sibe ngababoneleli abaphambili behlabathiImodyuli yekhamera yoluhlu olude kakhulu.
Jonga iTekhnoloji yeSheen yasekwa kwi-2016 kwaye yafumana isatifikethi seshishini lesizwe le-high-tech kwi-2018. Abasebenzi abangundoqo be-R & D bavela kumashishini awaziwayo kwishishini, kwaye amava abo aphakathi angaphezulu kweminyaka eyi-10.
Jonga iTekhnoloji yeSheen iphucula itekhnoloji engundoqo ye-audio kunye ne-encoding yevidiyo, ukulungiswa kwemifanekiso yevidiyo, ulawulo lwemoto.Umgca wemveliso ugubungela zonke iindidi zeemveliso ezivela kwi-3x ukuya kwi-90x, i-HD epheleleyo ukuya kwi-Ultra HD, i-zoom yoluhlu oluqhelekileyo ukuya kwi-zoom ye-ultra emide, kwaye idlulela kwiimodyuli ze-thermal zenethiwekhi, ezisetyenziswa ngokubanzi kwi-UAV, ukugada kunye nokhuseleko, umlilo, ukukhangela. kunye nokuhlangula, ukuhamba ngolwandle kunye nomhlaba, kunye nezinye izicelo zeshishini.Iqela leemveliso kunye nobuchwepheshe lifumene amalungelo awodwa abenzi besizwe kunye namalungelo esoftware, kwaye aneCE, FCC kunye neRoHS imvume.
Jonga iimveliso zeTekhnoloji zeSheen zibonelela ngeseti yeemarike ezithe nkqo ezigubungela amazwe angaphezu kwama-20 kunye nabathengi abangaphezu kwe-100.Sineqela lenkxaso yobugcisa obuchwephesha ukuqinisekisa iimpendulo ezikhawulezayo kwiimfuno zamaqabane.
Ngokufanelekileyo, inkampani ibonelela ngenkonzo yobuchwephesha ye-OEM kunye ne-ODM ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zemarike.Kwiminyaka eliqela edlulileyo, iJonga iSheen yenze nzulu ulwazi namava ekuhlangabezaneni neemfuno zabathengi kwiimarike ezahlukeneyo ezithe nkqo.
1. Iqela lobuchwephesha: Awona malungu eqela le-R & D angundoqo aphuma kumashishini aziwayo, ane-avareji yeminyaka eli-10 yamava e-R&D.Sinokuqokelela okunzulu kwi-algorithm ye-AF, ukusetyenzwa kwemifanekiso yevidiyo, ukuhanjiswa kwenethiwekhi, ukufakwa kwekhowudi yevidiyo, ulawulo lomgangatho, njl.
2. Ugxininiso: Ukuzibandakanya kuphando kunye nophuhliso, ukuveliswa kweekhamera zoom iminyaka engaphezu kwe-10.
I-3.I-Comprehensive: Umgca wemveliso ugubungela zonke iindidi zeemveliso ezivela kwi-3x ukuya kwi-90x, i-1080P ukuya kwi-4K, i-zoom eqhelekileyo yoluhlu olude ukuya kwi-1200mm.
4. Ukuqinisekiswa komgangatho: Inkqubo yokuvelisa esemgangathweni kunye nepheleleyo kunye nokulawula umgangatho kuqinisekisa ukuthembeka kwemveliso.
Imodyuli yeKhamera yokwandisa iNethiwekhi Ikhamera yobushushu 30x Zoom Camera Mdule Ikhamera yeMax yeOptical Zoom Ikhamera yokwandisa ixesha elide imodyuli yekhamera yokusondeza